Bit By Bit - Sava lalana - 1.4.1 Readymades sy Custommades
Fikarohana ara-tsosialy ao amin'ny vanim-potoana nomerika no anjara Readymades, Custommades, ary mahery grefy.
Ny iray amin'ireo malaza indrindra hatramin'izay urinals dia novidina tamin'ny 1917, ary urinal dia, amin'ny lafiny sasany, toy ny fikarohana ara-tsosialy maro ao amin'ny taona nomerika. Ny urinal amin'ny fanontaniana dia novidina ny frantsay mpanakanto Marcel Duchamp. Rehefa mividy azy io, Duchamp no nosoratan'ny "R. Mutt 1917 "teo amboniny, ary avy eo dia atao hoe ny zavatra noforoniny Loharano (Sary 1.2). Na ny voalohany fandraisana ho an'ny dia matimaty, Loharano efa tonga heverina iray amin'ireo manan-danja indrindra tapa-maoderina zavakanto satria ifotony niova ny fomba ny olona mieritreritra ny zavakanto (Higgins 2004) . Loharano dia ohatra iray Readymade, izay mpanakanto mahita zavatra efa misy eo amin'izao tontolo izao avy eo repurposes izany toy ny zavakanto.
Sary 1.2: Loharano avy Marcel Duchamp. Loharano dia ohatra iray Readymade, izay mpanakanto mahita zavatra izay efa misy eo amin'izao tontolo izao avy eo mamorona repurposes azy ho kanto. Hatramin'izao, be dia be ny fikarohana ara-tsosialy ao amin'ny vanim-potoana nomerika no tafiditra repurposing tahirin-kevitra izay namorona nandritra ny tanjona hafa ankoatra ny fikarohana. Sary avy Alfred Stiglitz, taona 1917. Source: Wikimedia Commons .
Ny ankamaroan'ny fikarohana ara-tsosialy ao amin'ny vanim-potoana nomerika izay, hatramin'izao, nanana rafitra toy izany, na dia tsy tena mitovy amin'ny vokany. Mpikaroka no tonga saina fa ny firaketana an-tserasera namorona ny fitondram-panjakana sy ny raharaham-barotra araka izay mahamety azy-toy ny finday hazo, digitized soratra, ary ny haino aman-jery sosialy data-azo repurposed ho an'ny fiaraha-monina fikarohana (Lazer 2015) . Amin'ny teny hafa, be dia be ny fikarohana ara-tsosialy ao amin'ny vanim-potoana nomerika efa ny fikarohana ho an'ny Data Readymades.
Na dia izany aza, toy ny ankamaroan'ny artista tsy mandeha manodidina ny mitady Readymades, ara-tsosialy ny ankamaroan'ny mpikaroka tany aloha dia efa tsy nandeha manodidina ny mitady tahirin-kevitra izay azo repurposed. Kosa, fa tsy ho angona-nandroaka, tena nahomby fikarohana ara-tsosialy tamin'ny lasa efa fanontaniana-noroahina. Izany hoe, mpikaroka nanana fanontaniana, ary avy eo dia nahita na nahary ny fanazavana ilaina mba hamaliana izany. Mpanakanto izay mampiseho izany fomba hafa ny asa Michel-Ange. Te hanao sarivongan'i Davida, ka dia nandritra ny 3 taona miasa amin'ny andian-tsoratra vato marmora fotsy mba hamorona ny sangan'asa (Sary 1,3). Davida dia tsy ny Readymade; dia Custommade.
Figure 1.3: David amin'ny Michaelangelo. Davida dia ohatra ny zavakanto izay fanahy iniana noforonina; dia Custommade. Izany dia mifanohitra amin'ny fomba Readymades toy ny Loharano (Sary 1.2). Fikarohana ara-tsosialy ao amin'ny vanim-potoana nomerika no anjara na Readymades sy Custommades. Sary avy Jörg Bittner Unna, 2008. Source: Wikimedia Commons .
Fikarohana ara-tsosialy ao amin'ny vanim-potoana nomerika no anjara na Duchamps sy Michelangelos, na Readymades sy Custommades. Ity boky ity dia hijery ny fomba fijery roa ireo, ary, ny zava-dehibe kokoa, dia mampiseho ny fomba azo mitambatra ho mahery mifangaro. , Ohatra, i Josoa sy ny mpiara-miasa aminy Blumenstock, ny tapany Duchamp sy ny anjara Michel-Ange; dia repurposed ny finday antso tahirin-kevitra (ny Readymade) ary namorona ny valin'ny fandinihana natao (ny Custommade). Zavatra tsy mampifangaro ny Readymades sy Custommades dia lamina fa hahita mandritra ity boky ity.